April | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya April 30, 2017	Leave a comment 273 Views
Bihar (Himilonews) – Nin caruus ah ayaa la qarracmay inuu indhihiisa ku arko gacalisadiisa oo guursaneysa nin kale – halkii ay isaga ka guursan laheyd xilli xafladdu ay ka soctay hool weyn oo uu kireeyey. Dhacdadan ayaa kasoo shaac-baxday bilowgii toddobaadkan degmada Bihar ee dalka Hindiya. Marka loo eego xubnaha qoyska caruuska, lamaanaha ayaa markii ugu horreysay kulmay kadib kolkii ...
Zakariya April 30, 2017	Leave a comment 221 Views
Abuja (Himilonews) – Sey ayaa la niyad xun kadib markii afadiisa ay noqotay xaamilo kadibna ay dhashay cunug fasax la’aantiisa, marka loo eego dukumenti maxkamadeed oo Nigeria ku taalla. 39-jirka lagu magacaabo Michael Ayinde ayaa dacwad furriin ah ka gudbiyay afadiisa oo u hanqal-taagaysa dhalista carruur dhowr ah – iyada oo hadda heysata 6 carruur ah muddo laga joogo 9 sano ...
Zakariya April 29, 2017	Leave a comment 591 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalin kasta, 6,300 oo qof ayaa u dhinta natiijada shilalka ku yimaada howl-maalmeedkooda ama siyaalo kale oo la xiriira – in ka badan 2.3 milyan oo xoogsato ama shaqaale ah ayaa sanadkiiba u geeriyooda. 317 milyan oo shilal ah ayaa ku yimaada shaqaalaha ama xoogsatada ku guda-jira howl-maalmeedkooda. Sanadkan 2017, Ol’olaha Ururka Shaqaalaha Caalamiga ee International Labor ...
Wiil yar oo Dallad kaga soo haaday dabaq ay degan yihiin
Zakariya April 26, 2017	Leave a comment 248 Views
Beijing (Himilonews) – Hooyo ayaa qarracan ka qaaday aragtida wiilkeeda oo kasoo dhacay dhismo isasaar ah – kadibna si xun u dhaawacmay. Marka loo eego hooyada, wiilka ayaa daawanayay muuqaal Kartuun ah – oo muujinaya qof kaga soo haadaya dhismo dheer barashuut; isna wuxuu isku dayay inuu sidaas oo kale sameeyo. U sheegid la’aanta qorshihiisa qofna, wiilkan 7 sano jirka ...
Zakariya April 26, 2017	Leave a comment 287 Views
Rome (Himilonews) – Haweeney u dhalatay dalka Australia, ayaa rikoorka caalamka ku gashay u adeegsiga carrabkeeda inay ku joojiso marwaxad ama dhigdhigo babaneysa, marka loo eego muuqaal lasoo dhigay barta internet-ka. Zoe Ellis, oo sidoo kale loo yaqaan Zoe L’Amore, waxay kasoo muuqatay muuqaal fogaan-arag oo lagu qabanayay gudaha dalka Talyaaniga – iyada oo carrabkeeda u isticmaalaysa inay ku joojiso ...
Zakariya April 25, 2017	Leave a comment 343 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalinta Caalamiga ee Duumada ama Malaariyada waa baraarug guud oo sanad kasta la xuso bisha April 25-keeda – iyada oo lagu garowsado dadaallada caalamiga ah ee lagu maareynayo cudurkan. Duni ahaan, 3.3 bilyan oo ku kala nool 106 dal ayaa halis ugu jira Duumada. Sanadkii 2012, cudurka Duumada waxaa u geeriyooday tiro lagu qiyaasay 627,000 kuwaas oo ...
Lakulan: Ninka ay 36 sano ku qaadatay sameynta kanaal-biyood dhex maraya saddex buurood.
Zakariya April 24, 2017	Leave a comment 362 Views
Muqdisho (Himilonews) – Qaadista qiirada ah sare-u-qaadista xaaladaha nololeed ee reerkiisa, Huang Dafa, horfiiqa Caowangba oo ah xaafad yar oo ku hoos qarsan buuraha gobalka Guizhou ee Shiinaha, wuxuu 36 sanadood ka qodayay kanaal biyood gaaraya 10 kilomitar ku dhawaad saddex buurood oo isku dhagan. Hal-doorka Yu Gong wuxuu ka hadlayaa nin da’ ah kaas oo gurigiisu ay laba buurood ka sooceen ...
Zakariya April 23, 2017	Leave a comment 259 Views
Muqdisho (Himilonews) – 23 April waa maalin ay hey’ada QM u qaabilsan dhaqanka, seyniska iyo wax-barashada u aqoonsatay Maalinta Caalamiga ee Afka Ingriiska sanadkii 2010 si loogu dabaal-dego afka Ingiriiska iyo kaalinta uu dunida kaga jiro. Waa maalin, si kale marka laga fiiriyo, lagu xasuusto dhalashada iyo geerida qoraagii Ingiriis ee William Shakespeare. Waxayna maalintan kamid tahay ku dhawaad lix ...
Zakariya April 23, 2017	Leave a comment 343 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalinta Buugga iyo Xuquuqda Lahaanshaha ama Copy-right-ka waa dhacdo sanadle ah oo ay soo agaasinto hey’adda QM u qaabilsan dhaqanka, culuumta iyo wax-barashada ee UNESCO. Sanad kasta 23 bisha April ayaana la xusaa. Dhacdada gaarka ah ee munaasabbada Maalintan ayaa daaha looga rogaa ku kala duwanaanta siyaalaha hal-aqrinta, lahaanshaha xuquuqda iyo daabacadda dunida ka jirta. Sanad kasta, ...
Zakariya April 22, 2017	Leave a comment 230 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalinta Caalamiga ah ee Dhulka Hooyo waxaa loogu dabaal-degaa in mid kasta oo inaga tirsan uu xusuusnaado in dhulka iyo hab-nololeedkiisa deegaan ay nolosheenna u yihiin nagaadi iyo nafci. Waxay sidoo kale garwaaqsataa mas’uuliyaddii shacbi oo la iskugu yeeray sanadkii 1992 shirkii Rio Declaration – in la ilaaliyo xasilloonida dabeecadda iyo dhulka si loogu guuleysto isku dheell-tirnaanta ...
Sahan — Dhalinyarada Induniisiya oo si dadban u xaadiraya Khudbadaha Masaajidda.
Just Room Enough – Jaziiradda ugu yar Adduunka.